If you are underweight, you may have been told by your doctor that you should gain weight. If you are an athlete, yaungada uremu nokuda kwezvikonzero zvinoverengeka – kana nekuti uchida kubatana zvikuru yemakwikwi uremu kirasi kuti Tournaments, kana nekuti uchida kuwana mhasuro, muzive ucha- uremu somugumisiro kupfeka kuti imwe kwetsandanyama (recomping – kurasikirwa mafuta apo kuchisimba – Zvakaoma kuita uye asingauyi vanowanzotevedzera kuguma kuoneka simba anowana vanhu vari kare kukwanawo).
saka, chii haakuvadzi uye inobudirira nzira uremu? tsime, nzira dzose kuti uremu kutevera ichocho – udye macalorie kupfuura iwe ushandise pazuva nezuva hwaro, uye ucha- uremu somugumisiro.
The mubvunzo, sei macalorie kupfuura vazhinji uchifanira kudya rimwe zuva, uye chii chinofanira macalorie avo kuva muchimiro?
Kana kudya zvokudya zvisingavaki muviri, muchawana uremu, asi yakawanda zvichava zvakakora. Kana kudya zvokudya kuti akapfuma mapuroteni uye utano mafuta, uye kuva guru mafuta yemuraudzo, uchabva vachiri kuwana zvakawanda mafuta, asi vamwe tsandanyama pamwe chete. Kana ukatevera iroro kudya apo kusimudza masimbi, ipapo uchawana simba uye vawane mhasuro – uyewo mafuta.
Kana kudya mafuta yemuraudzo pamusoro 500+ macalorie pazuva zvichienzaniswa kwako zvachose zuva nezuva simba zvekushandisa, ipapo muchawana mafuta, kunyange kana uri kusimudza Zviidzo panguva imwe chete. The mafuta pfuma, zvinosiririsa, unavoidable. Eating at Eating a smaller calorie surplus might help you to gain more muscle and less fat, asi nguva dzose pachava nevamwe mafuta dzokusatendeseka.
Vamwe vanhu havambokwanisi guru dumbu, uye vanoona kuti zvakaoma kudya macalorie inokwana here uremu – asi iwe unogona kuwana kumativi ichi achishandisa mapuroteni chinozunungusa uye vakawanda gainers, uye kunyange nokunwa smoothies kuti zvimwe macalorie.
chaizvo, murairidzi simba Mark Rippetoe anokurudzira kuti vanhu vari kutarisa kuti doro gallon mukaka zuva kutsigira mafuta yaunodya kuti anotenda ane ruzivo vanofanira pavanenge kuita purogiramu simba yokudzidzisa. This isn’t something that you could sustain for very long periods of time, but for a young man who is looking to gain serious muscle mass, it could be an option.